पुर्वेली वासीन्दा समेत गुल्मीन्युज डटकमका फ्यान – Gulmiews
पुर्वेली वासीन्दा समेत गुल्मीन्युज डटकमका फ्यान
July 1, 2016 Raju Gautam
गुल्मी, असार–१७ । कहिले काठमाण्डौ त कहिले नुवाकोट, शंखुवासभा, ईलाम, झापा त कहिले घरान लगायतका पाठकहरुबाट फोन आएर सोधिन्छ –‘ यो गुल्मी न्युज डटकम कहाँबाट सञ्चालन भएको छ ? र किन हामी यतातिरका वासीन्दाको न्युज कम आउँछ ? ’ त्यसवारे मैले भन्ने गर्छु –‘ मैले त गुल्मी र यस आसपासका न्युज मात्रै राख्ने जिम्मा पाएको छु बाँकी कुरा डेक्सले जान्ने कुरा हो , मैले तपाईहरुको कुरा डेक्समा पुराई दिने छु । ’
फोनबाट देखाईएको चासोलाई दृष्टिगत गर्दा गुल्मी न्युजडटकमका फ्यान बढि मात्रमा शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी , वौद्धिक जमात र बैदेशिक रोजगारमा रहेका पुर्व मेची देखि पश्चिम महाकाली सम्मका नेपालीहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुको फोन, सामग्रीहरुमा गरिएको लाईक र शेयरले गुल्मी न्युजलाई उहाँहरुकै शव्दमा यो हाईटमा पुराएको हो ।
त्यस्तै आज पुर्व मोरङ्गकी एक जना होनाहर श्रष्टाको फोन आयो । उहाँ मोरङ्गको विराटनगर–१३ की भावना घिमिरे हुनुहुँदो रहेछ । उहाँले भन्नु भयो –‘ मैले गुल्मी न्युज डटकम हेरिरहन्छु । समाचार पढ्छु अन्य गतिविधी हेछुर विशेष गरी मेरो चासो त्यसमा छापिएका साहित्यीक खुराकहरु प्प्रति हुन्छ । ’
उहाँले थप्नु भयो ‘साहित्य क्षेत्रमा मैले पनि कलम चलाउँदै आएकोले म सहित यस क्षेत्रका मानिसहरुले पनि गुल्मी न्युजडटकममा स्थान पाउन सक्छन्’ । स–गौरव हुन्छ यहाँहरुलाई स्वागत छ भन्दै उहाँका केहि रचनाहरु प्रकाशित गरेका छौं ।
प्रधान सम्पादक सञ्जु काउछा,
प्रविधीमा सम्पादन सहयोगी राजु गौतम र
गुल्मी विशेष सम्वादाता यसै समाचारदाता